तपाँइको हातमा कति वटा चक्र र शंख छ ? थाहा पाउनुहोस् आफ्नो भाग्य
८ वटा औलामा शंख भएकाहरु भने सुखी र धनी हुन्छन् । हातमा चक्र हुनेहरुलाई पनि भाग्यमानी मानिन्छ । १० वोटै औलामा चक्र भएकाहरुले संसार जित्ने शास्त्रमा उल्लेख छ । एउटा मात्र चक्र भएको मान्छे बुद्धिमान हुन्छ भने दुइवटा भएको व्यक्ति सुन्दर हुन्छ ।
जौ को चिन्ह
समुन्द्र शास्त्रका अनुसार जुन ब्यक्तिको हातको औंलामा जौ जस्तो चिन्ह हुन्छ त्यस्ता ब्यक्ति निक्कै धनीमानी र सुखी हुने बताइन्छ । यो चिन्ह हुने ब्यक्ति भाग्यमानी पनि हुने गर्छन् । समाजमा प्रतिष्ठिन हुने र राजनीतिमा लागे सफल राजनीतिज्ञ हुने हस्त रेखा विज्ञानको दावी छ ।
समुन्द्र शास्त्रमा हस्त रेखामा हातमा हुने चक्रको बारेमा पनि चर्चा गरिएको छ । जुन ब्यक्तिको १० वटै औंलामा चक्र छ भने त्यसता ब्यक्ति संसार जित्ने ब्यक्ति हुन्छन् । १ मात्र औंलामा चक्र भएमा विद्वान हुन्छ । २ औंलामा चक्र छ भने सुन्दर हुने मानिन्छ । भने ३ औंलामा चक्र हुने ब्यक्ति सुखी हुन्छन् र यस्ता ब्यक्तिलाई भोग र विलाश मन पर्छ ।
सूर्य पर्वत –हातको अनामिका औंलाको (चोरऔंला) फेँदमा सूर्य पर्वत हुन्छ । सूर्यको सम्बन्ध राजनीतिक र सरकारी उच्च क्षेत्रसँग मानिन्छ । सूर्य रेखा सफा छ भने यस्ता ब्यक्ति सरकारी उच्च पदमा पुग्छन् । त्यसमा त्रिभुज समेत छ भने उनीहरुको प्रभाव देशमा मात्र होइन विदेशमा समेत हुन्छ ।
१.बाँया तर्फ घुमेको शंख
२.दाँया तर्फ घुमेको शंख
३. मिश्रति प्रकारको शंख
बाँया तर्फ घुमेको शंख
दाँया घुमेको शंख भएका व्यक्तिलाई भाग्यशाली, धनवान, ज्ञानी, प्रतिभाशाली र धमात्मा बनाउदछ । मिश्रति प्रकारको शंख दाँया र बाँया तर्फ घुमेको शंखको फल भन्दा लगभग उस्ता उस्तै मान्न सकिन्छ तर मिश्रति प्रकारको शंखको रचना दरु विभिन्न दिशातर्फ मोडिएको हुन्छ ।
शंखको औला अनुसार फल
१.बुढी औठामा बाँया घुमेको शंख भएमा जातकले आफ्नो जीवनकालमा धेरै हानी नोक्सानी र कठिनाईको सामना गर्नुपर्दछ, साथै भावि आउने वाला समस्या र कस्ट द्वारा निराश हुन्छ । औठामा दाया घुमेको शंख छ भने यस्ता व्यक्तिहरू भाग्यशाली र धनी हुन्छन् ।
२.बायाँ घुमेको शंखको चिन्ह तर्जनी औलामा भएमा जातकले आफ्ना इस्ट मित्रबाट धन र मान सम्मानको हानि नोक्सानी बेहोर्नु पर्दछ । औलामा दाँया घुमेको शंख छ भने त्यस्ता व्यत्तिले सामान्य जीवन यापन गर्ने हुन्छन् ।
३.मध्यमा औलाको टुप्पोमा दाँया घुमेको शंख भएमाः( जातकलाई धन पैसाको कुनै कमि हुँदैन र जातक धार्मिक विचारको स्वामी हुन्छ ।
४.अनामिका औलामा दाँया घुमेको शंख भए यस्ता व्यक्तिको संचित धन पैसाको नस्ट हुन्छ ।
५.कनिष्ट कान्छी औलाको अग्र भागमा शंख छ भने जातकले आफ्नो व्यापार व्यवसायद्वारा धेरै धन पैसा कमाउछ ।
काठमाडौंमा बालेन १९ हजार ६१५ मतले अगाडी, स्थापित तेस्रो…